Tag: ika iguzosi ike n'ihe | Martech Zone
Tag: ika iguzosi ike
Mgbe obula m n’ekwu maka iguzosi ike n’ihe, a na m akuko akuko nkem mgbe m na azuta ugbo ala m. Ruo ihe karịrị afọ iri, eguzosiri m ike nye Ford. Enwere m mmasị n'ụdị, ịdị mma, ịdị ike, na ire ere nke ụgbọ ala na gwongworo niile m zụtara n'aka Ford. Mana ihe niile gbanwere ihe dịka afọ iri gara aga mgbe ụgbọ ala m chetara. Mgbe ọ bụla okpomọkụ dara n'okpuru oyi na iru mmiri dị elu, ọnụ ụzọ ụgbọ ala m ga-eme
Dika otutu ahia na ire ahia, ijiko akara ndia siri ike mgbe ufodu n'etiti ihe ndi ahia riri na isi ihe nzuta. Otú ọ dị, obi abụọ adịghị ya na mmekọrịta dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya na omume ịzụta. Ndị CMO na - amalite inweta nyocha na enwere nsogbu yana… ihe na - atọ ụtọ! Ihe omuma a sitere na SocialAnnex, ihe omuma ahia nke ndi mmadu maka ecommerce, na-enye ufodu ihe nchoputa. Bara uru ndị ahịa, ọ bụrụ na ọ na - eduga, igwe mmadụ, mmetụta, ndị ahịa
Nke a nwere ike ịbụ ntakịrị nke geeky, techy, post mana naanị m ga-eso gị kerịta ya. Otu n'ime ebumnuche nke Martech Zone na-enye ndi mmadu ozi banyere teknụzụ yana ahia - yabụ ị ga-ahụ ụfọdụ ederede dị mma na teknụzụ na ngwakọta site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ọkwa a amalite ịgụ dị ka Klingon, nyefee ya na CIO gị. Ama m na ọ ga-amasị ya! Nke a